२०७६ साल जेठ महिनाको राशिफल::Nepali Online News Portal
पं. ज्यो. शहदेव कोईराला -फोनः ९८५१०८८५६१
संचार गृह/ शुक्रबार, जेष्ठ ३, २०७६
मेष राशि हुनेहरुको लागि यो महिना समग्रमा सकारात्मक महिना रहेको छ । गरेको कार्यमा सफलता पाईनेछ । इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुन सकिनेछ । कला, साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । ब्यापार ब्यबसायबाट आम्दानी हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ५,८ र शुभ रङ्ग हरियो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृष राशि हुनेहरुका लागि यो महिना राम्रो छ । नजिकको व्यक्तिबाट सहयोग मिल्नेछ । इच्छा र आकाङ्क्क्षा पूर्ण हुनेछ । अरुको मन जित्न सकिनेछ । प्राविधिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । व्यवसायका क्रममा यात्रा गर्नुपर्नेछ । पारिवार संग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । महिनाको अन्त्यमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्श गर्नु पर्नेछ । महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
मिथुन राशि हुनेहरुका लागि यो महिना राम्रो देखिएको छ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुन सकिनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा औसत लाभ हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,९ र शुभ रङ्ग गुलाबी वा केशरी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
कर्कट राशि हुनेहरुका लागि पनि यो महिना राम्रै देखिएको छ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । रोकिएका अधुरा कार्यहरु पुरा हुनेछन् । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । वैदेशिक यात्राको योग छ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । साथै अकस्मात धन सम्पत्ति हात पर्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि नवग्रहको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुका लागि यो महिना राम्रो छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । प्रतिस्पर्धामा सम्मानजनक स्थान हात पर्नेछ । नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । विशिष्ट व्यत्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महालक्ष्मीजीको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुका लागि यो महिना मिश्रित खालको छ । झञ्झटिलो काममा संलग्न हुनुपर्ने समय छ । पढाइलेखाइमा पनि खासै प्रगति गर्न नसकिने देखिन्छ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । मध्य महिनामा प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । वैदेशिक क्षेत्र बाट सफलता मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ५,६ र शुभ रङ्ग निलो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि बगलामुखीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अत्यन्त लाभ प्राप्त हुनेछ ।
तुला राशि हुनेहरुका लागि पनि यो महिनामा मिश्रित रहेको छ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरु सम्पन्न हुनेछन् । कमजोरी बाहिर आउनाले नोकरीमा समस्या पर्न सक्छ । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ला । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,६ र शुभ रङ्गे रातो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णुभगवानको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि यो महिना राम्रो देखिएको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । यो महिनामा तपाईंको राशिबाट सातौँ भावमा सूर्यले भ्रमण गर्नाले राम्रै फल मिल्नेछ । पारिवारिक सम्बन्ध कसिलो हुनेछ । जोश,जाँगर र हिम्मत बढ्ला । कुटुम्बबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । वाहान लाभ हुने समय आएको छ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,८ र शुभ रङ्ग सेतो वा नीलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुका लागि यो महिनामा सामान्य रहनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । महिनाको अन्त्यमा अनावस्यक झुटा आरोप लाग्ने हुँदा सजक रहनुहोला । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउला । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ५,८ र शुभ रङ्ग सेतो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
मकर राशि हुनेहरुका लागि यो महिना राम्रो देखिएको छ । लामो यात्रा सुखद् र सफल हुनेछ । मध्य महिनाबाट आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । यो महिनामा तपाईंको राशिबाट सन्तान सुख मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुनसकिनेछ । नयाँ काम वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर छ । बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग हल्का गुलाबी वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व मृत्युञ्जय भगवानको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ प्राप्त हुनेछ ।
कुम्भ राशि हुनेहरका लागि यो महिना मिश्रित रहेको छ । प्रेममा मनमुटावका साथै मन कमजोर रहला । घर व्यवहारको समस्याले सताउला । २० गतेबाट ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुनसकिनेछ । मित्रहरूले दिएको वचन फेरिन सक्छ । यो महिनामा तपाईंको राशिबाट दशौँ भावमा सूर्यले भ्रमण गर्नाले मिश्रित फल मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,७ र शुभ रङ्ग हल्का पहेंलो वा सेतो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महाकालीजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
यो महिनामा मीन राशि हुनेहरुका लागि राम्रो फल मिल्ने योग छ । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्य बाट अधिक सफलता मिल्नेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । २२ गते बाट दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग खैरो वा पहेंलो हो ।